Wariyihii Ugu Horeeyay Ee Ogaaday In Liverpool Ay Doonayso Saxiixa Gool Dhaliyaha Lille Ee Nicolas Pepe Oo Xog Cusub Bixiyay. - Gool24.Net
Wariyihii Ugu Horeeyay Ee Ogaaday In Liverpool Ay Doonayso Saxiixa Gool Dhaliyaha Lille Ee Nicolas Pepe Oo Xog Cusub Bixiyay.
Liverpool ayaa xiisaynaysa in ay kooxda Lille kala soo wareegto gool dhaliyaha wacdaraha soo dhigay ee Nicolas Pepe kaas oo ay sidoo kale doonayaan kooxaha Bayern Munich iyo Manchester United.
Wariyaha lagu kalsoon yahay ee Mohamed Bouhafsi oo ka hawl gala warbaahinta France ee RMC Sport iyo BFMTV ayaa shaaciyay wararkii ugu danbeeyay ee heshiiska ay Liverpool ku doonayso Nocolas Pepe.
Wariye Mohamed Bouhafsi oo ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee soo bandhigay in Liverpool ay xidhiidh la samaysay kooxda Lille ayaa sheegay in Reds ay boos fiican u taagan tahay in ay xidigan la soo wareegto.
Laakiin Mohamed Bouhafsi ayaa cadeeyay in kooxda Bayern Munich lafteedu ay dhinaca kaga jirto wada xaajoodka ay ku doonayso saxiixa Pepe.
Wariye Mohamed Bouhafsi oo ka hadlaya warka Nicolas Pepe ee Liverpool ayaa yidhi: “Liverpool meel fiican ayay u joogtaa, laakiin Liverpool iyo Bayern Munich ayaa Lille iyo ciyartoyga la xaajoonaya”.
“Waqti xaadirkan horumar lagama samayn sababtoo ah ciyaartoygu waxa uu doonayaa in uu wax ka yara badan ka fikiro. Saddex kooxood oo aad u muhiimsan ayaa si deg deg ah naftooda boos uga samaysan doona”.
Tababaraha kooxda Lille ee Christophe Galtier ayaa hore u cadeeyay in Nicolas Pepe uu xagaagan ka baxayo kooxdiisa laakiin Liverpool ayaa tartan kala kulmaysa Bayern Munich oo wada xaajood dhinaceeda kala furtay Lille iyo Pepe.
Laakiin Mohamed Bouhafsi ayaa cadeeyay in Liverpool ay wali boos fiican u joogto in ay la soo saxiixato Nocolas Pepe kaas oo uu Jurgen Klopp doonayo in uu kooxdiisa ku soo xoojiyo.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa haddaba sii qiysaasay shaxda uu Jurgen Klopp ku ciyaari doono maadaama oo uu doonayo saxiixa Nicolas Pepe.
Waxayna taageerayaasha Reds baraha bulshada ku soo bandhigeen in Klopp uu ku ciyaari doono shaxda nooceedu yahay 4-2-3-1 oo ah afar difaac ah, laba dhexda ah, saddex dhexda hore oo uu Nicolas Pepe ku jiri doono iyo Mohamed Salah oo weerarka hore loo durkin doono.
Si kastaba ha ahaatee, Mohamed Bouhafsi ayaa rajo cusub u abuuray taageerayasha kooxda Liverpool ee dhawaan maqlayay wararkii soo baxay ee sheegayay in Bayern Munich uu doortay xidigani kaas oo sida cadaatay aan wali go’aan gaadhin.